I-Apple Music Yokusingathwa Komcimbi wokusakazwa bukhoma we-albhamu entsha kaKayne West Kusasa ngoLwesine | Ngivela kwa-mac
UManuel Alonso | 22/07/2021 14:00 | eziningana
I-Apple Music ayigcini ngokuqhakambisa abaculi abayingxenye yendawo yonke kuphela kodwa futhi bayisebenzisa ngokunenzuzo ukukhuthaza ukuhlukaniswa komculo. Ngalokhu kuzoba yi Umsakazi obukhoma okhethekile womcimbi wokusakazwa komhlaba wonke we UNdunankulu kaDonda "Donda", i-albhamu yesitudiyo se-rap star yesi-XNUMX. Lokhu kwamenyezelwa Def Jam Ukuqoshwa ku-tweet.
UKanye West uzokhipha i-albhamu yakhe iDONDA 7/23 pic.twitter.com/KPVSzQVwwz
- Ukuqoshwa kwe-Def Jam (@defjam) July 21, 2021
I-Def Jam Recordings imemezele ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi ukuthi ngoLwesine oluzayo, kusasa, bazokhipha i-albhamu entsha kaKanye West bukhoma. Emcimbini osudayisiwe futhi ozoba seMercedes-Benz Stadium e-Atlanta. I-Apple Music izosakaza umcimbi wokulalela bukhoma kusukela ngo-8 ekuseni isikhathi sendawo. I-albhamu "Donda" izophuma ngemuva kosuku olulodwa, ngoJulayi 23.
Futhi kumenyezelwe nguBeats, oyithumele ngesikhathi semidlalo eyedlule ye-NBA. Lesi sikhangiso, esenziwe futhi sahlelwa ngabakwaNtshonalanga, sifaka phakathi isiqeshana sevidiyo entsha ye-albhamu yakwaDonda esihloko sithi "Ayikho Ingane Eshiywe Ngemuva" kanye nomgijimi odumile waseMelika uSha'Carri Richardson. Esikhangisweni, amaBeats Studio Buds afana nezinwele ze-protagonist ayaziswa kakhulu.
Indaba kaRichardson inelukuluku lokwazi: Ukuphatha kwakhe kahle ibanga lika-100m kwakumqinisekise ngohambo oluya eTokyo, kodwa umphumela awuzange usebenze ngemuva kokuhlolwa ukuthi une-THC. Kamuva wavuma ukuthi ubhema insangu ukuze abhekane nokushona kukanina omzalayo futhi wavuma ukumiswa inyanga eyodwa. UDonda waseWest, oqanjwe ngegama likanina ongasekho, uza ngemuva kuka-2019 "UJesu uyiNkosi."
Akukona okokuqala ukuthi i-Apple ibe nemicimbi ekhethekile esakazwa bukhoma esikhathini esedlule. Kufanele sikhumbule i- umbukiso wokuqala wedokhumende ekhethekile «UBillie Eilish: Kufiphele Okuncane Emhlabeni"ngoFebhuwari.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » I-Apple Music izosingatha umcimbi osakazwa bukhoma emcimbini we-albhamu entsha kaKayne West yangakusasa ngoLwesine